Ndị Hibru_10: 26, Enwere ike ịzọpụta ndị na -ala azụ? - IntegritySyndicate.com
Ịhụnanya na -ebute ụzọ
Oziọma dị mkpa
Ọ bụghị n'okpuru Iwu
Iwu na Ụbọchị Izu Ike megide ọgbụgba ndụ ọhụrụ
Na -agọnarị iwu Torah
Otu Chineke na Nna
Jizọs, Mezaịa ahụ
Ndụ, Ọnwụ na Olileanya Nzọpụta
Baptizim n'aha Jizọs
Onyinye nke Mmụọ Nsọ
Ekpere dị mkpa
Ntachi obi ruo ọgwụgwụ
Ndị Hibru_10: 26, Enwere ike ịzọpụta ndị na -ala azụ?
Ntọala Akwụkwọ Nsọ
KJV rụrụ arụ
Ntụgharị asụsụ Bekee Bekee kacha mma
Luk-Ọrụ Ndị Isi
Agba Ọhụrụ Edere n'asụsụ Grik
Nrụrụ Aka nke Akwụkwọ Nsọ
Ịghọta Ọdịiche Agba Ọhụrụ
Ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ
Christology nke Akwụkwọ Nsọ
Jọn 1 Interlinear
1 Jọn 1: 1-3
Abụ m nkwupụta nke Jizọs
Jizọs bụụrụ anyị ihe nlereanya
Otu Onye Ogbugbo
Ụlọ Ọrụ Akwụkwọ Nsọ
Ihe mgbochi ụlọ ọrụ na -aza
Otu Chineke na otu Onyenwe anyị
Preexistence nke Kraist
Nyocha nke Ndị Filipaị Isi nke 2
Ndị Filipaị 2: 5-11
Ịchịkwa Mmetụta - Gịnị bụ Mmụọ Nsọ
Mgbanwe nke Ozizi Atọ n'Ime Otu
Ozizi Atọ n'Ime Otu
Ndepụta weebụsaịtị Weebụ iguzosi ike n'ezi ihe
Ihe omumu nke Baibul
Njikọ njikọ weebụsaịtị
N'ịhụnanya, n'eziokwu na n'ime mmụọ
Mweghachi nke 1st narị afọ Apostolic Christianity
Mbido Post Ndị Hibru_10: 26, Enwere ike ịzọpụta ndị na -ala azụ?
Na-agbagha nghọtahie gbasara Ndị Hibru 10:26 na 6: 4-6 na agaghị agbaghara gị ma ị kpachara anya mehie ma ọ bụ daba na mmehie.
Kedu ihe Grik na -ekwu na amaokwu 26?
Nsụgharị nkịtị na nkọwa
Ụdị nsụgharị nkịtị
Idozi Akwụkwọ Nsọ
Gịnị banyere Ndị Hibru 6: 1-8?
Kedu ihe Grik na-ekwu n'amaokwu Ndị Hibru 6: 4-6?
A na-aghọtahie amaokwu abụọ na Ndị Hibru (10:26 na 6: 4-6) dị ka na-ekwu na ọ bụrụ na ị kpachaara anya mehie mgbe ị nwetasịrị ihe ọmụma nke eziokwu wee bụrụ onye kwere ekwe, na a gaghị agbaghara gị maka mmehie ụma mee. Agbanyeghị, nke a bụ nghọtahie nke ihe a na -ekwu. Ka anyị leba anya n'okwu amaokwu a na ihe Grik na -ekwu. Ka anyị bido site na-ele ntụgharị ESV nke amaokwu nke Ndị Hibru 10: 22-39 yana kwa Ndị Hibru 10:26 na KJV.
Ndị Hibru 10: 22-39
22 ka ayi were ezi obi biarue nso na okwukwe zuru oke. 23 Ka anyị jidesie nkwupụta nke olile anya anyị ike n'atụghị egwu, n'ihi na onye kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. 24 Ka anyị tụleekwa otu anyị ga -esi na -akpalite ibe anyị n'ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, 25 ọ bụghị ileghara izukọta ọnụ, dị ka ụfọdụ ndị na -eme, kama na -agbarịta ibe anyị ume, na ihe ndị ọzọ ka ị na -ahụ ụbọchị na -abịa.
26 N'ihi na ọ bụrụ na anyị amara ụma na -eme mmehie mgbe anyị nwetasịrị ihe ọmụma nke eziokwu, àjà agaghị adịkwa ọzọ maka mmehie, 27 kama ọ bu olile -anya di egwu nke ikpé, na oke iwe nke ga -erepịa ndị mmegide. 28 Onye ọ bụla nke wepụrụ iwu Mozis nwụrụ na -enweghị ebere na akaebe nke ndị akaebe abụọ ma ọ bụ atọ. 29 Kedu ụdị ntaramahụhụ ka njọ, ị chere na onye ahụ zọkwasịrị ụkwụ Ọkpara Chineke ga -enweta, ma merụọ ọbara ọgbụgba ndụ nke e ji doo ya nsọ, wee kpasue mmụọ nke amara? 30 N'ihi na anyị maara onye ahụ nke sịrị, “Ịbọ ọbọ bụ nke m; M ga -akwụ ụgwọ. ” Ọzọkwa, "Jehova ga -ekpe ndị ya ikpe. " 31 Ọ bụ ihe dị egwu ịdaba n'aka Chineke dị ndụ.
32 Mana cheta ụbọchị ndị mbụ mgbe, mgbe ị nwesịrị nghọta, ị tachiri obi na mgba na ahụhụ, 33 mgbe ụfọdụ ekpughere nkọcha na nhụjuanya n'ihu ọha, na mgbe ụfọdụ ịbụ ndị mmekọ na ndị emere ụdị ihe a. 34 N'ihi na unu nwere ọmịiko n'ebe ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ nọ, unu wee jiri ọ acceptedụ nabata ịkwakọrọ ngwongwo unu, ebe unu maara na unu nwere ihe ka mma na nke na -adịgide adịgide. 35 Ya mere atụfula obi ike gị, nke nwere nnukwu ụgwọ ọrụ. 36 n'ihi na ntachi obi dị unu mkpa, ka unu wee nata nkwa ahụ mgbe unu mere uche Chineke. 37 N'ihi na, “Ọ fọdụrụ nwa oge, onye na -abịa ga -abịa agaghị egbu oge; 38 ma onye ezi omume m ga -adị ndụ site n'okwukwe, ọ bụrụkwa na ọ laa azụ, mkpụrụ obi m enweghị mmasị n'ebe ọ nọ. ” 39 Mana anyị abụghị nke ndị na -asụ laa azụ na ndị e bibiri, kama nke ndị nwere okwukwe ma chekwa mkpụrụ obi ha.
(Ndị Hibru 10:26)
26 N'ihi na asi na ayi kpachaara anya mehie, mb wee ayi natasiri nmazu nke ezi -okwu, ọ dighi àjà ọzọ diri nmehie ọzọ.
Isiokwu nke amaokwu a bụ idobe okwukwe anyị ka ụbọchị (Onyenwe anyị) na -abịaru nso. Anyị achọghị ka achọta anyị n'ime mmehie mgbe Onyenwe anyị ga -alọghachi, anyị ga -echekwa Ikpe. Amaokwu nke 26 na -abịa ozugbo amaokwu nke 25 kwuru maka 'ụbọchị na -abịaru nso'. Nke a bụ ihe gbara amaokwu 26 kwesịrị ịghọta. O doro anya na ESV bụ ntụgharị ka mma na nke a ma e jiri ya tụnyere KJV n'ihi na okwu Grik maka ime mmehie dị n'ezie. Nke ahụ bụ, ọ bụghị mmehie kpachaara anya na -ama anyị ikpe kama ọ dị njikere ịlaghachi n'ụdị ndụ mmehie (na -eme mmehie mgbe niile n'enweghị ihe mgbochi). Ihe a na -akọwa ebe a bụ ma ọ bụrụ na anyị na -eleghara okwukwe anya (si n'ezi ofufe dapụ) wee hụ na anyị na -ebi ndụ mmehie, mgbe ụbọchị bịara, a tụfuola àjà maka mmehie. Ndapụ n’ezi ofufe bụ ntọhapụ nke okwukwe. Ọ bụrụ na anyị ahapụ okwukwe, anyị na -ahapụ àjà anyị. Ileba anya nke ọma n'asụsụ Grik na -akwado nyocha a nke ọma.
N'okpuru ebe a bụ ederede Grik dị mkpa maka Ndị Hibru 10: 26 sochiri tebụl interlinear zuru ezu na okwu Grik ọ bụla n'usoro, ntụgharị asụsụ Bekee, nkọwa Parsing, na nkọwa okwu nke okwu Grik ọ bụla. A na -enye ntụgharị asụsụ nkịtị na ntụgharị asụsụ n'okpuru tebụl dị n'etiti
Ndị Hibru 10:26 (NA28)
26 A na -atụ anya mmụba nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri,
N'okpuru ebe a bụ nsụgharị nkịtị nke Ndị Hibru 10:26 dabere na tebụl etiti. Ọ dabara n'usoro okwu Grik. Egosikwara bụ ntụgharị asụsụ nkọwa ntakịrị.
na -enweghị mmanye, ya bụ ụma, ụma mee ya
na -egosi ntinye ma ọ bụ ịga n'ihu: maka, n'ihi na, n'ezie, mana
ọ bụrụ na-eme mmehie
Ngwaa, Dị ugbu a, Na -arụsi Ọrụ ike, Onye na -eme ihe, Ezigbo, Nwoke, Ọtụtụ
mehie, mehie, me ihe ọjọ
Ndị nnọchiaha, Genitive, (Ọ dịghị nwoke ma ọ bụ nwanyị), ọtụtụ, mmadụ 1
Mu, mu, nkem; anyị, anyị, anyị; agbakwunyere maka imesi ike: onwe m, onwe anyị
Nhazi nke na -achị onye ebubo
(Jen.) na, n'etiti, akara nke mkpakọrịta na ụdị dị iche iche; (acc.) ka emechara, mgbe e mesịrị, akara nke oge
Onye na -ekpebi ihe, onye na -ebo ebubo, onye na -anọpụ iche, dị n'otu
nke; nke a, na; ya, ya, ya; τοῦ ya na inf. ka, ka, ka nsonaazụ ya bụrụ nke ahụ
Ngwaa, Aorist, Ifịk, Enweghị ngwụcha
iwere, nata; (gafere.) ka a ga -anabata, họrọ
Onye na -eme mkpebi, onye na -ebo ebubo, nwanyị, onye dị n'otu
onye, ​​nke a, onye ahụ, onye
Noun, Genitive, Femine, Singular
ihe ọmụma, ịmata, nsụhọ
Nchọpụta, Ọdịmma, Nwanyị, Otu
agakwaghị, ọ bụghị ọzọ, ọ bụghị ọzọ, agaghịkwa ọzọ
Nkọwapụta nke na -achị Ọdịdị
(1) Jen. gbasara, gbasara, nke, na -arụtụ aka; maka; n'ihi (π. offering ọtụtụ mgbe na -achụ àjà mmehie); (2) nnabata. gburugburu, ihe; nso; nke, na -ekwu maka, gbasara
Noun, Genitive, Feminine, otutu
mmehie, ihe ọjọọ; na -emekarị omume ọ bụla megidere uche na iwu Chineke
a gbahapụrụ ya
Ngwaa, Ugbu a, Na -agafe agafe, Ngosipụta, Onye nke atọ, dị n'otu
hapụ; gbahapụ, ọzara (n'ụzọ nkịtị, nọrọ); site na ntinye, ịhapụ
Aha, Nhọpụta, Nwanyị, Otu
àjà, onyinye; omume onyinye
Ndị Hibru 10:26 Nsụgharị nkịtị
N'ihi na ọ bụrụ na anyị kpachaara anya mehie - anyị onwe anyị
- mgbe m nwetasịrị ihe ọmụma nke eziokwu -
- agakwaghị - maka mmehie -
a gbahapụrụ ya - onyinye
Ndị Hibru 10:26 Nsụgharị Nsụgharị
N'ihi na ọ bụrụ na anyị amara ụma na -eme mmehie
ke ama ọkọbọ ifiọk akpanikọ,
ọ dighi àjà ọ bula bayere nmehie-
Hapụ amaokwu ahụ ka ọ na -ezo aka n'okwu Grik bụ isi nke a na -aghọtahiekarị.
Okwu Grik Ἑκουσίως (hekousiōs) pụtara ụma, ụma ma ọ bụ kpachaara anya mee ya. A na -eji ya naanị ugboro abụọ na agba ọhụrụ Ihe ọzọ pụtara na okwu a site na ihe ọzọ mere na 1 Pita 2: 5, “na -azụ ìgwè atụrụ Chineke nke dị n'etiti unu, na -elezi anya, ọ bụghị n'okpuru mmanye, ma obi, dị ka Chineke ga -achọ gị. ” N'amaokwu a, e nwere ihe dị iche na okwu Grik nke pụtara na mmanye. Nke ahụ bụ Ἑκουσίως (hekousiōs) bụ ntụgharị nke mmanye. Ihe ọ pụtara bụ “ọ bụrụ na-eme mmehie” na-enweghị mgbochi, mgbe ahụ, a ga-ahapụ àjà ahụ. Nke ahụ bụ onye na -eme mmehie na -eme ya na -eleghara eziokwu anya kpamkpam. Mgbe mmadụ rere onwe ya maka mmehie ha ahapụla okwukwe ha.
“Nke na-eme mmehie”
Okwu Grik ἁμαρτανόντων (hamartanontōn) dị na mkpụrụedemede Greek. Ihe a na -ejikarị eme ihe bụ mkpụrụokwu bụ mgbe okwu dị na mkpụrụokwu na -enye nkọwa ụfọdụ nke isi ama (ọ bụ nkọwa). Nke ahụ bụ, okwu ahụ na -arụ ọrụ dị ka adjective. A na -agbakwụnye okwu ahụ "nke" n'ihu ngwaa maka ihe omume nke mkpụrụ ndụ ihe nketa. Ihe onye na-eme ya na-egosikarị na ọ bụrụ na-eme mmehie. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na anyị “na-eme mmehie” (ọ bụghị na anyị kpachaara anya mehie) agbahapụla àjà/onyinye anyị.
Nkọwa dị mkpa ebe a bụ na ọ na -ekwu maka ọnọdụ a kọwara ugbu a dị ka onye na -etinye aka n'ime mmehie. Okwu ikpe ahụ na -agbanwe ihe ngwaa pụtara n'ụzọ nke na ngwaa ahụ na -akọwa ụdị akparamagwa dị ugbu a karịa nke gara aga. Ihe ọ pụtara bụ ngwaa “ime mmehie” na -akọwa ọnọdụ dị ugbu a, ụdị akparamagwa, ma ọ bụ njirimara. N'ezie anyị achọghị ka ejide anyị na mmehie mgbe Onyenwe anyị ga -alọghachi. Ọ bụrụ na anyị tụfuru okwukwe anyị, anyị tụfukwara àjà anyị. Amaokwu a ekwughị ihe ọ bụla na ọ bụrụ na anyị tụfuru okwukwe anyị, na ọ gaghị ekwe omume iweghachi ya. Mana anyị kwesịrị ichegharị ma hapụ mmehie ọzọ ka ụbọchị nke Onye -nwe -anyị abịakwasị anyị na mberede.
"A gbahapụrụ ya"
Okwu Grik ἀπολείπεται (apoleipetai) pụtara ịhapụ ma ọ bụ ịgbahapụ. Ihe ọ pụtara bụ ịhapụ. Ọ bụrụ na anyị ahapụ okwukwe anyị, anyị ga -ahapụ àjà anyị. Ọ bụrụ na anyị ahapụ okwukwe anyị, anyị na -ahapụ àjà anyị. Agbanyeghị, ọ nweghị ihe dị n'akụkụ amaokwu a na -egosi na ọ bụrụ na anyị alaghachi n'ọchịchịrị anyị enweghị ike ịlaghachi n'ìhè ma weghachite okwukwe anyị.
Nsụgharị ziri ezi nke Ndị Hibru 10:26 bụ Literal Standard Version nyere ya. ebe agbakwunyere okwu "nọ" iji gbanwee okwu a "ime mmehie." Nke a na -enye nkọwa pụtara nke ọma na anyị na -anọghị na nkwa nke Chineke ma ọ bụrụ na anyị na -eme mmehie (ọ bụghị na anyị kpachaara anya mehie mgbe anyị bụ onye kwere ekwe). A pụghị ịhụ anyị n'ọnọdụ nke ịma ụma nupụ isi mgbe Onyenwe anyị ga -alọta. Ọ bụrụ na anyị ajụ ya - ọ ga -ajụ anyị.
Ndị Hibru 10:26 (NIV)
Maka [ọ bụrụ] anyị na- na -eme ọchịchọ obi ime mmehie mgbe ọ natasịrị ezi ihe ọmụma nke eziokwu — a gaghị achụkwa aja ọzọ maka mmehie,
N'okpuru ebe a bụ amaokwu dị iche iche iji tinye ihe n'ọnọdụ. Chineke dị ebere ma na -agbaghara mmehie.
(Abụ Ọma 32: 5) M ga -ekwupụtara Jehova njehie m, ”ị gbaghakwara ajọ omume m
5 Ekwetara m gị mmehie m, ekpuchighịkwa m ajọ omume m; Ekwuru m, “M ga -ekwupụtara Jehova njehie m,” ị gbaghakwara ajọ omume nke mmehie m. Selah
Ezikiel 18: 21-23 (NIV) Ọnwu onye n wickedmebi iwu, ọ̀ nātọm utọ, ọ bu ihe si n'ọnu Onye -nwe -ayi Jehova puta?
21 Ma mb ife onye n wickedmebi iwu si na nmehie-ya nile nke o mehie, we debe ukpurum nile, me ezi omume na ikpé, ọ ghaghi idi ndu; ọ gaghị anwụ. 22 Ọ dịghị mmebi iwu ọ bụla o mebiri nke a ga-echeta ya. n’ihi ezi omume ahụ nke o mere, ọ ga-adị ndụ. 23 Ọ na -atọ m ụtọ na ọnwụ onye ajọ omume, ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, na ọ bụghị na ọ ga -ahapụ ụzọ ya wee dịrị ndụ.?
(Luk 17: 3-4) Ọ bụrụ na o mehie gị asaa - wee tụgharịa tụgharịa ugboro asaa, sị, 'echegharịala m,' ị ga -agbaghara ya.
3 Lezienu onwe-unu anya. Ọ bụrụ na nwanna gị emehie, baara ya mba, ma ọ bụrụ na ọ chègharịrị, gbaghara ya, 4 ọ bụrụkwa na o mehie gị ugboro asaa n'ụbọchị, chigharịkwute gị ugboro asaa, sị, 'Echegharịala m,' gbaghara ya. "
Ọrụ 17: 30-31 (NIV) Ugbu a ọ na -enye iwu ka mmadụ niile nọ ebe niile chegharịa
30 Chineke lefuru oge amaghị ama anya, ma ugbu a ọ na -enye mmadụ nile iwu ka ha chegharịa, 31 n'ihi na o weputara otu ụbọchị ọ ga -ekpe ụwa ikpe n'ezi omume site n'aka otu nwoke onye ọ họpụtara; na nke a ka o nyeworo mmadụ nile mmesi obi ike site na ịkpọlite ​​ya site na ndị nwụrụ anwụ. ”
1 Jọn 1: 5-9. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị
5 Nke a bụ ozi anyị nụrụ n'ọnụ ya ma kwusaara gị, na Chineke bụ ìhè, na ọchịchịrị adịghị n'ime ya ma ọlị. 6 Ọ bụrụ na anyị asị na anyị na ya nwere mmekọ mgbe anyị na -eje ije n'ọchịchịrị, anyị na -agha ụgha ma anyị anaghị eme eziokwu. 7 Ma ọ bụrụ na anyị na -eje ije n'ìhè, dị ka ọ nọ n'ìhè, anyị na -enwe mmekọrịta n'etiti onwe anyị, ọbara Jizọs Ọkpara ya na -asachapụ anyị mmehie niile. 8 Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na -aghọgbu onwe anyị, eziokwu adịghịkwa n'ime anyị. 9 Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na ịsachapụ anyị ajọ omume niile.
1 Ndị Tesalonaịka 5: 2-6 (ESV), Lna anyị anaghị ehi ụra, dịka ndị ọzọ na -ehi, mana ka anyị mụrụ anya ma nwee anya udo
2 N'ihi na unu onwe unu maara nke ọma ụbọchị Onyenwe anyị ga -abịa dịka onye ohi n'abalị. 3 Mgbe ndị mmadụ na -asị, “Udo na ntụkwasị obi dị,” mgbe ahụ mbibi mberede ga -abịakwasị ha dịka ihe mgbu na -abịakwasị nwanyị dị ime, ha agaghịkwa agbanahụ ya. 4 Ma unu anọghị n'ọchịchịrị, ụmụnna m, ka ụbọchị ahụ ju gị anya dịka onye ohi. 5 N'ihi na unu niile bụ ụmụ nke ìhè, ụmụ nke ehihie. Anyị abụghị nke abalị ma ọ bụ ọchịchịrị. 6 Ya mere, ka anyị ghara ịrahụ ụra, dịka ndị ọzọ na -ehi, kama ka anyị mụrụ anya ma nwee anya udo.
1 Ndị Kọrịnt 1: 4-9. Dịka ị na -eche mkpughe nke Onye -nwe anyị Jizọs Kraịst
4 Ana m ekele Chineke m mgbe niile maka unu n'ihi amara nke Chineke nke enyere unu n'ime Kraịst Jizọs, 5 na n'ụzọ ọ bụla e mere gị ọgaranya n'ime ya n'okwu niile na ihe ọmụma niile— 6 ọbụna dị ka ọgbụgba -ama banyere Kraịst siri ike n’etiti unu— 7 nke mere na ọ nweghị ihe onyinye ọ bụla kọrọ gị, ebe unu n waitche nkpughe nke Onye -nwe -ayi Jisus Kraist, 8 onye ga -akwagide gị ruo ọgwụgwụ, na -enweghị ụta n'ụbọchị Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. 9 Chineke kwesiri ntukwasi -obi, Onye esitere n'aka Ya kpọbata unu na nnwekọ nke Ọkpara -Ya, Jisus Kraist Onye -nwe -ayi.
(Jemes 5: 14-15) Ekpere nke okwukwe ga -azọpụta onye na -arịa ọrịa - ọ bụrụ na o mere mmehie, a ga -agbaghara ya.
14 Anyone nwere onye ọ bụla n'etiti unu na -arịa ọrịa? Ka ọ kpọọ ndị okenye ụka, ka ha kpeekwara ya ekpere, tee ya mmanụ n'aha Onyenwe anyị. 15 Ekpere nke okwukwe ga -azọpụtakwa onye na -arịa ọrịa, na Onyenwe anyị ga -akpọlite ​​ya. Ọ bụrụkwa na o mere mmehie, a ga -agbaghara ya.
(Ndị Hibru 3: 12-15) Na -agbarịta ibe unu ume kwa ụbọchị, ọ bụrụhaala na a na -akpọ ya "taa"
12 Lezienụ anya, ụmụnna, ka ọ ghara ajọ mmụọ nke ekweghị ekwe dị n'ime onye ọ bụla n'ime unu, nke ga -eduga unu isi n'ebe Chineke dị ndụ nọ wezuga onwe unu. 13 Ma na -agbarịta ibe unu ume kwa ụbọchị, ọ bụrụhaala na a na -akpọ ya “taa,” ka aghụghọ nke mmehie ghara ime onye ọ bụla n'ime unu. 14 N'ihi na anyị bịara isoro Kraịst keta oke, ọ bụrụ n'ezie na anyị na -ejigide ntụkwasị obi mbụ anyị ruo ọgwụgwụ. 15 Dị ka a na -ekwu, "Taa, ọ bụrụ na ị nụrụ olu ya, unu emela ka obi unu sie ike dị ka nnupụisi."
Mkpughe 2: 4-5 (ESV), Repent, ma rụọ ọrụ ndị ị rụrụ na mbụ. Ma ọ bụghị ya, aga m ewepụ ihe ndọba oriọna gị n'ọnọdụ ya
4 Ma enwere m ihe a megide gị, nke ahụ ị hapụla ịhụnanya ahụ i nwere na mbụ. 5 Ya mere cheta ebe i siri da; chegharịa, rụọkwa ọrụ ndị ị rụrụ na mbụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, aga m abịakwute gị wepu ihe ndọba oriọna gị n'ọnọdụ ya, belụsọ ma ị chegharịrị.
Mkpughe 2: 14-16 (ESV), Repent. Ọ bụrụ na ọ bụghị, aga m abịakwute gị n'oge na -adịghị anya wee jiri mma agha nke ọnụ m buso ha agha.
14 Ma enwere m ihe ole na ole megide gị: Ị nwere ụfọdụ ebe ahụ na -ejigide nkuzi Belam, onye kuziri Belak ka ọ debe ihe ịsụ ngọngọ n'ihu ụmụ Izrel, ka ha wee rie nri a chụrụ n'àjà nye arụsị ma mee ịkwa iko. 15 Ya mere, ị nwekwara ụfọdụ ndị jidere nkuzi nke ndị Nikolait. 16 Ya mere chegharịa. Ọ bụrụ na ọ bụghị, aga m abịakwute gị n'oge na -adịghị anya wee jiri mma agha nke ọnụ m buso ha agha.
Mkpughe 2: 20-22. Mụ na ya na -akwa iko, m ga -atụba ya n'oké mkpagbu, ọ gwụla ma ha chegharịrị n'ọrụ yas
20 Ma enwere m nke a megide gị, ka ị hapụ nwanyị ahụ Jezebel, onye na -akpọ onwe ya onye amụma nwanyị, na -akụziri ma na -eduhie ndị ohu m ịkwa iko na iri nri a chụrụ n'àjà nye arụsị. 21 M nyere ya oge ka o chegharịa, ma ọ jụrụ ichegharị site n'ịkwa iko ya. 22 Lee, m ga -atụba ya n'elu ihe ndina, m ga -atụbakwa ndị ha na ya na -akwa iko n'oké mkpagbu, ọ gwụla ma ha chegharịrị n'ọrụ yas,
Mkpughe 3: 1-3 (ESV), Repent - Ọ bụrụ na ị gaghị eteta, m ga -abịa dị ka onye ohi
1 “Degaara mmụọ ozi nke ụka dị na Sadis akwụkwọ, sị, 'Okwu nke onye nwere mmụọ asaa nke Chineke na kpakpando asaa. “'Amaara m ọrụ gị. Ị nwere aha nke ịdị ndụ, mana ị nwụrụ. 2 Bilie, mee ka ihe fọdụrụ ma na -aga ịnwụ sie ike, n'ihi na ahụghị m ọrụ gị ka ọ zuru oke n'anya Chineke m. 3 Ya mere, cheta ihe ị natara na nke ị nụrụ. Debe ya, chegharịa. Ọ bụrụ na ị gaghị eteta, m ga -abịa dị ka onye ohi, ị gaghịkwa ama awa m ga -abịa imegide gị.
Mkpughe 3: 15-20. Ndị m hụrụ n'anya ka m na -abara mba ma na -adọ aka na ntị, yabụ nwee ịnụ ọkụ n'obi ma chegharịa
15 “'Amaara m ọrụ gị: ị jụghị oyi, i kpoghịkwa ọkụ. Ọ dị m ka ya bụrụ na ị jụrụ oyi ma ọ bụ kpoo ọkụ! 16 Ya mere, maka na ị dị ukearaukeara, i kpoghị ọkụ, ị jụghịkwa oyi, m ga -agbụpụ gị ọnụ site n'ọnụ m. 17 N'ihi na ị na -ekwu, abụ m ọgaranya, emeela m ọgaranya, ọ dịghịkwa m mkpa ọ bụla, n'amaghị na ị bụ onye ọjọọ, onye nwere ọmịiko, ogbenye, onye ìsì, na onye gba ọtọ. 18 Ana m adụ gị ọdụ ka ị zụtara m ọla edo nke anụcha nụchara anụcha, ka i wee baa ọgaranya, na uwe ọcha ka i wee yiwe onwe gị uwe na ihere ịgba ọtọ gị agaghị ahụ, wee chekwaa tee anya gị mmanụ, ka i wee nwee ike. lee. 19 Ndị m hụrụ n'anya ka m na -abara mba ma na -adọ aka na ntị, yabụ nwee ịnụ ọkụ n'obi ma chegharịa. 20 Lee, m na -eguzo n'ọnụ ụzọ na -akụ aka. Ọ bụrụ na onye ọ bụla anụ olu m wee meghee ụzọ, m ga -abịakwute ya rie nri, ya na m ga -erikwa nri.
A na-ejikọkarị Ndị Hibru 6: 4-6 na Ndị Hibru 10:26 iji bụrụ okwu na ọ bụrụ na ị dapụ na ị furu efu. Kedu ka nyocha nke ọma ga -esi egosi ihe onye ode akwụkwọ bu n'obi gbasara Grik mbụ. Ntụgharị asụsụ Bekee adịchaghị enye nsụgharị kwesịrị ekwesị. Isi ihe maka ịghọta ihe gbara amaokwu 4-6 bụ amaokwu 7-8.
Ndị Hibru 6: 1-8
1 Ya mere, ka anyị hapụ ozizi mmalite nke Kraịst gaa n'ihu ruo ntozu okè, ghara ịtọ ntọala ọzọ maka nchegharị site n'ọrụ nwụrụ anwụ na okwukwe n'ebe Chineke nọ, 2 na nkuzi gbasara ịsa ahụ, ibikwasị aka, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ikpe ebighi ebi. 3 Anyị ga -emekwa nke a ma ọ bụrụ na Chineke kwere. 4 N'ihi na ọ gaghị ekwe omume, n'ihe banyere ndị ahụ enwetela mbụ, ndị detụrụ onyinye nke eluigwe ire, sorokwa keta oke na Mmụọ Nsọ., 5 ma edetụla m ire ịdị mma nke okwu Chineke na ike nke ụwa na -abịa, 6 e mesịa, ha adaala, iji weghachi ha ọzọ na nchegharị, ebe ha na -akpọgidekwa Ọkpara Chineke ọzọ na mmerụ ahụ ha ma na -eleda ya anya.. 7 Maka ala na -a dụ mmiri ozuzo nke na -ezokarị na ya, na -amịpụta ihe ọkụkụ bara uru nye ndị a na -akọ ya, na -enweta ngọzi n'aka Chineke. 8 Ma ọ bụrụ na o nwere ogwu na uke, ọ baghị uru, ọ dịkwa nso ịbụ onye a bụrụ ọnụ, ọgwụgwụ ya ka a ga -agba ọkụ..
N'okpuru ebe a bụ ederede Grik dị mkpa maka Hib 6-4-6 na tebụl interlinear zuru ezu yana okwu Grik ọ bụla n'usoro, ntụgharị asụsụ Bekee, nkọwa, na nkọwa mkpụrụokwu nke okwu Grik ọ bụla. Ntụgharị asụsụ nkịtị na nkọwa site na tebụl interlinear zuru ezu dị n'okpuru tebụl.
Ndị Hibru 6: 4-6 (NA-28)
4 Nke a bụ ndepụta nke ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa.
5 A na -atụ anya mmụba dị ukwuu na mgbatị ahụ
6 A na -atụ anya ka ndị na -eto eto nwee obi ụtọ na ihe ịga nke ọma.
Adjective, Nominative, Neuter, Otu
ka enweghi ike ịrụ ọrụ nke ọma, enweghị ike, adịghị ike
Onye na -ekpebi ihe, onye na -ebo ebubo, nwoke, ọtụtụ
a na -enye ha ìhè
Ngwaa, onye nkuzi, onye na -agafe agafe, onye otu, onye na -ebo ebubo, nwoke, ọtụtụ
nye ìhè, nye ìhè, nwuo; kpughee, kpughee, mee ka a mara; mara ihe, na -enwu
ha edetụwo ire
Ngwaa, onye nkuzi, onye etiti, onye otu, onye na -ebo ebubo, nwoke, ọtụtụ
nụrụ ụtọ, rie, rie (na -egosi ụtọ ahụmịhe ahụ)
na, mana (a naghị asụgharịkarị ya); ma… na
nke eluigwe; nke eluigwe
na kwa, ma, ọbụna; ya bụ, ya bụ
onye na -ekere òkè, onye mmekọ; enyi, enyi
ha bụ ihe kpatara
bụrụ, bụrụ; ime, mee, bilie (aor. na -emetụtakarị. ọ mere ma ọ bụ mee); bido dịrị, mụọ ma ọ bụ kee ya; mee (ihe), bụrụ ihe (nke mmadụ); bia, jee
mmụọ, ndụ ime, onwe; ọnọdụ, ọnọdụ uche; mmụọ, ịbụ mmụọ ma ọ bụ ike, ike (ọtụtụ mgbe nke ajọ mmụọ); ndụ
Adjective, Genitive, Neuter, dị n'otu
e doro iche ma -ọbụ site na Chineke, edoro ya nsọ; dị nsọ, dị ọcha n'omume, zie ezi;
na; na mgbe ahụ, mgbe ahụ; mana, n'agbanyeghị, agbanyeghị; kwa, ọbụna, n'otu aka ahụ
Adjective, Ebubo, Egwu, Otu
ọ dị mma; nri, kwesịrị ekwesị, dabara adaba; ka mma; nsọpụrụ, ịkwụwa aka ọtọ; dị mma, mara mma, dị oke ọnụ ahịa
detụ ire; rie; ahụmịhe
Noun, Genitive, Nwoke, Otu
Chineke dị ka uche Chineke si dị, na -asọpụrụ Chineke; dika oyiyi Chineke si di
Noun, Onye Ebubo, Neuter, Otu
ihe ekwuru, okwu, ikwu; ihe, okwu, ihe omume, na -eme
Mkpọaha, Onye Ebubo, Nwaanyị, Ọtụtụ
ike, ike; omume ike, ọrụ ebube
na; na nka, so
nke na -abịa
Ngwaa, Ugbu a, Na -arụsi Ọrụ Ike, Onye Pụrụ Ime, Ezigbo, Nwoke, Otu
na -aga, na -aga, na -ezube; kwesịrị, bụrụ akara aka; (ptc. enweghị inf.) na -abịa, ọdịnihu
afọ; usoro ụwa; mgbe ebighi ebi
na kwa, ma, ọbụna; ya bu
ọ bụrụ na ha adaa
Ngwaa, Aorist, Na -arụsi ọrụ ike, onye na -eso ya, na -ebo ebubo, nwoke, ọtụtụ
dapụ, pụọ n'ezi ofufe
ọzọ, otu ugboro ọzọ
Ngwaa, Ugbu a, Ifịk, Enweghị ngwụcha
ya na acc. n'ime, na; n'ime, na, na, na n'elu, na nso; n'etiti; megide; gbasara; dika
Noun, Onye Ebubo, Nwanyi, Otu
nchegharị, mgbanwe obi, ịtụgharị site na mmehie mmadụ, mgbanwe ụzọ
ha na -akpọgide ya n'obe
Ngwaa, Ugbu a, Na -arụsi ọrụ ike, onye na -eme ihe, onye na -ebo ebubo, nwoke, ọtụtụ
kpọgide ya n'obe; kpọgide ya n'obe ọzọ
n'ime onwe ha
Nkpọaha, Dative, nwoke, ọtụtụ, onye nke atọ
onwe ya, onwe ya, ya onwe ya; onye nwere pro. ya, nke ya, wdg; onye nkwado pro. ibe, ibe
Onye na -eme mkpebi, onye na -ebo ebubo, nwoke, onye dị n'otu
nke; nke a, na; ya, ya, ya; ya na inf. ka, ka, ka nsonaazụ ya bụrụ nke ahụ
Aha, Ebubo, Nwoke, Onye
nwa nwoke; nwa, nwa, onye nketa; (ya na gen.) mgbe mgbe onye na -eso onye ma ọ bụ ihe enwe mmekọrịta pụrụ iche; onye na -eso ụzọ, onye na -eso ụzọ
Onye na -ekpebi, Ọdịmma, Nwoke, dị iche
nke; nke a, na; ọ, ọ, ya
Chineke, Chukwu; dika oyiyi Chineke si di
ha na -emechu ihu
ido onwe ya n'okpuru ihere ọha, jigide nlelị, kpughee ịkwa emo ọha
N'okpuru bụ ntụgharị asụsụ nkịtị dabere na tebụl dị n'elu. Enwekwara ya bụ ntụgharị ntụgharị okwu enwere ike ịgụta karịa dabere na nkịtị.
Ndị Hibru 6: 4-6 Nsụgharị nkịtị
4 Ma enweghị ike ndị mbụ
ma onyinye nke elu -igwe
mekwara ka a na-ekerịta Mmụọ Nsọ
5 ha detụwokwa ire ụtọ okwu Chineke
ọbụna ike nke ọgbọ na -abịa
6 Ma ọ bụrụ na ha daa
ọzọ ka eweghachi ya na nchegharị
ha kpọgidere n'obe nwa Chineke
ọzọ kwa, ha n disme ihere
Ndị Hibru 6: 4-6 Nsụgharị Nsụgharị
4 Mana ndị nwere nkwarụ bụ ndị mbụ
na -enwu gbaa
ebe o detụrụ ire
ma onyinye eluigwe
ebe eme -kwa -ra ka ha keta Mọ Nsọ
5 ebe ha nwetakwara okwu Chineke mara mma
ọbụna ike nke afọ na -abịa
6 Ma ọ bụrụ na ha daa -
ọzọ ka eweghachi ya na nchegharị-
ha kpọgidere n'obe Ọkpara Chineke n'obe
ma menye ya ihere.
Okwu Grik Ἀδύνατον (adynatos) bụ ihe na -adịghị mma nke δυνατός (dynatos) nke pụtara ike. Ya mere, ihe ọ pụtara enweghị ike (ọ bụghị “agaghị ekwe omume” dịka ọtụtụ ntụgharị Bekee na -agụ). Enwere ike ịtụgharị nke a iji gosi adịghị ike, ụkọ, ntụpọ ma ọ bụ nkwarụ.
“Ebe m detụrụ onyinye onyinye nke eluigwe abụọ, ebe emekwara m ndị nketa nke Mmụọ Nsọ wee nweta ọmarịcha okwu nke Chukwu”
Nke a yiri ka ọ na -ezo aka na baptism ”nke Mmụọ Nsọ na ịsụ asụsụ dị ka Mmụọ na -enye ikwu okwu. Ọ bụghị onye ọ bụla nke kọwara onwe ya dị ka Onye Kraịst enwetala ahụmịhe bara ụba. Ihe ọ pụtara ebe a, bụ na ọ bụrụ na ịnata ụdị ahụmịhe ahụ, ọ nweghị ihe kpatara ị ga -eji daa. Ọ bụrụ na ị mee okwukwe gị dị oke ụkọ.
“Ọzọ ka eweghachi ya na nchegharị”
Ọ na -ekwu nchegharị kama ịzọpụta. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ịtọ ụtọ ihe ọma nke Chineke na ịnata Mmụọ Nsọ ezughị iji kwado nkwa nchegharị mmadụ nwere okwukwe na -adịghị arụ ọrụ nke na -eleghi anya a ga -edozi ya. N'ịbụ ndị na -enwu enwu, na -edetụla onyinye nke eluigwe, na -ekere oke na Mmụọ Nsọ, ma na -anụ ọmarịcha okwu nke Chineke kwesịrị ezu iji mee ka anyị nọrọ n'ọnọdụ nchegharị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị nwere nnukwu nsogbu. Agbanyeghị, ọ bụghị ndị niile kọwara onwe ha dị ka Ndị Kraịst nwere ụdị ahụmịhe bara ụba. Amaokwu a emetụtaghị ndị niile na -ahụbeghị Chineke n'ụzọ dị oke egwu.
"Ha kpọgidere Ọkpara Chineke n'obe n'ime onwe ha ma menye ya ihere"
Nkwupụta a abụghị ihe kpatara na enweghị ike iweghachi mmadụ na nchegharị. Ejighị okwu Grik dabara “maka” ma ọ bụ “n'ihi”. Kama nke ahụ, ọ na -ekwu maka ọghọm dị n'ịdapụ na -emechu Kraịst ihu. Onye dara wee nwụọ n'okwukwe ya kwesiri ka akpọ ya ọkụ n'ụbọchị ikpe Chineke. Nke a apụtaghị na anyị enweghị ohere ichegharị na ịlaghachikwute Chineke ebe taa ka dị taa. Ihe a na-ekwu ozugbo bụ amaokwu 7-8:
Ndị Hibru 6: 7-8
7 Maka ala na -a dụ mmiri ozuzo nke na -ezokarị na ya, na -amịpụta ihe ọkụkụ bara uru nye ndị a na -akọ ya, na -enweta ngọzi n'aka Chineke. 8 Ma ọ bụrụ na o nwere ogwu na uke, ọ baghị uru, ọ dịkwa nso ịbụ onye a bụrụ ọnụ, ọgwụgwụ ya ka a ga -agba ọkụ..
Kedu ihe a na -ekwu na ọ bụrụ na ịmịghị mkpụrụ mgbe ị risịrị mmiri nke ndụ nke mmụọ nsọ, okwukwe gị adịkwaghị ike. Nke ahụ bụ, ị nwere nkwarụ (na ọnọdụ nkwarụ) nke na -eme ka ị ghara ịlaghachi ịmị mkpụrụ. Ọ naghị ekwu na enweghị ike iweghachi mmadụ n'okwukwe mana ọ pụtara na ọ bụrụ na ha anaghị amị mkpụrụ okwukwe ha enweghị ike na arụ ọrụ. Rịba ama amaokwu Hib 6: 8 kwuru “nọ nso ịbụ onye a bụrụ ọnụ” (ọ bụghị ọbụbụ ọnụ). A ka nwere ohere ịmị mkpụrụ tupu owuwe ihe ubi agwụ. Chegharịa mgbe taa bụ taa!
Ma ndị Hibru 6: 4-6 ma ọ bụ Ndị Hibru 10:26 na-egosi na mmadụ enweghị ike ịzọpụta ma ọ bụrụ na ha ekwerela ọzọ wee daba na mmehie na ekweghị ekwe. Amaokwu abụọ a gbasara ịdị njikere maka ụbọchị Onyenwe anyị. Ọ bụrụ na achọpụtara na anyị ahapụla okwukwe anyị, a ga -agbahapụ aja Kraịst (dịka ọ gbasara anyị). Ọ bụrụ na anyị ahapụ Oziọma ahụ, a ga -ahapụ anyị. Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị a metụtara ịnọ na ọnọdụ ndapụ n'ezi ofufe. Ọ naghị akụzi na ọ bụrụ na anyị tụgharịrị n'otu oge, enweghị olileanya ịlaghachi. Chegharịanụ, n'ihi na alaeze Chineke dị nso!
Ohu nke otu Chineke na Nna - Onye na -eso ụzọ Onyenwe anyị Jizọs Kraịst - Onye hiwere otu iguzosi ike n'ezi ihe
Lelee ọkwa niile nke Theophilus Josiah
Ebe obibi Njikọ Eziokwu
Nabata na Integrity Syndicate
Ojiji ziri ezi na amụma nzuzo
(ESV) Bible ESV® (The Holy Bible, English Standard Version®), nwebisiinka © 2001 nke Crossway, ozi mbipụta nke Good News Publishers.
Nkwupụta nwebisiinka n'okpuru ngalaba 107 nke Iwu nwebiisinka nke 1976, a na -enye ohere maka “iji ya eme ihe” maka ebumnuche dịka nkatọ, nkọwa, mkpesa akụkọ, nkuzi, mmụta, agụmakwụkwọ, na nyocha. Ojiji ziri ezi bụ iwu ikike nwebisiinka nke nwere ike mebie.
Iso Ụzọ Kraịst narị afọ nke mbụ © 1 IntegritySyndicate.com
Kwadoro site na Bravada & WordPress.